Ny IMEX America dia mijery ny ho avy miaraka amin'ny tanjona sy ny fahasoavana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny IMEX America dia mijery ny ho avy miaraka amin'ny tanjona sy ny fahasoavana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Etazonia Vaovao Vaovao
Tonga ny countdown! Ny IMEX America dia hisokatra afaka herinandro vitsivitsy izay hitondra miaraka aminy karazana asa aman-draharaha isan-karazany, fotoam-pianarana ary ny fahafahan'ny indostria hifandray indray. Ny fandaharana, notontosaina tamin'ny 9-11 novambra tany Las Vegas, dia manana fiasa vaovao maro sy programa fandaharana miorina mivantana amin'ny areti-mifindra miaraka amina fotoam-pivoriana amin'ny fomba tsara hananganana ho avy mamiratra. Ny fihaonana ho an'ny indostrian'ny hetsika orinasa dia natao ho lehibe indrindra satria ny IMEX America dia mankalaza ny andiany faha-10 ary koa trano vaovao, Mandalay Bay.
Ny mpividy dia afaka mihaona amin'ireo mpamatsy manerantany izay misy ny seha-pihariana rehetra ao amin'ny IMEX America.
Manakaiky ny 3,000 mpividy nohamarinina fa hampiasa ny IMEX America ho sehatra hanombohana ny orinasa.
Ny ekipa IMEX dia namorona programa fanabeazana feno izay manome fahazavana ny amin'ny hoavin'ity sehatra ity sy ny fomba fananganana asa tsara.
Mpividy 3,000 XNUMX eo ho eo izao no voamarina manerana an'i Amerika Avaratra sy eran'izao tontolo izao, miampy mpividy mpanatrika an-jatony maro - avy any Etazonia - izay mampiasa ny IMEX America ho sehatra hanombohana ny asa aman-draharaha. Mijanona eo afovoan'ny fampisehoana ny orinasa ary ny mpividy dia afaka mihaona amin'ireo mpamatsy manerantany manerana ny sehatra rehetra ao amin'ny indostria.
Anisan'izany ny toerana eoropeanina any Aotrisy, Belzika, Repoblika Tseky, Kroasia, France, Alemana, Gresy, Italia, Irlanda, Malta, Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, Scandinavia, ary UK. Aostralia, Korea, Japon, Nouvelle Zélande, ary Singapour dia ao anatin'ny firenena Azia-Pasifika voamarina miaraka amin'i Kenya, Morocco, Rwanda, ary South Africa avy any Afrika. Avy any Atlanta sy Calgary ka hatrany LA sy Vancouver, mpampiranty amerikana sy kanadiana no mandeha an-kery. Manatevin-daharana toerana maro any Amerika Latina izy ireo toa an'i Arzantina, Brezila, Kolombia, Costa Rica, Ekoatera, Meksika, sy ny maro hafa.
Ny marika hotely iraisam-pirenena lehibe rehetra dia manatrika miampy trano fandraisam-bahiny kely sy bitika ary ny isan'ireo mpamatsy teknolojia mitombo isan'andro. Manantena ny hahita Cvent, EventsAIR, Hopin, Swapcard, RainFocus, ary MeetingPlay ankoatry ny hafa.
Tanjona sy tsara
Mahatsiaro fa mila havaozina ny fahaiza-manao aorian'ny taona sarotra, ny ekipa IMEX dia namorona programa fanabeazana feno izay manome taratry ny hoavin'ity sehatra ity sy ny fomba fananganana mandroso tsara. Ny fandaharam-pianarana maimaimpoana ao amin'ny IMEX America dia manomboka amin'ny alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, amin'ny 8 Novambra izay misy fanabeazana natokana ho an'ny matihanina amin'ny orinasa, orinasa ary orinasa. Mitohy hatrany ny fampianarana miaraka amina atrikasa, latabatra lohahevitra mafana ary seminera mandritra ny telo andro amin'ilay fampisehoana - natao hamahana ireo fomba fianarana samy hafa ireo rehetra ireo. Ny session dia nalamina ho lasa làlana vaovao, ao anatin'izany ny Famoronana amin'ny fifandraisana, Diversity ary ny fahazoana miditra, Fanavaozana sy teknolojia; Fanarenana orinasa, fifampiraharahana momba ny fifanarahana, marika manokana, ary fitohanana.
Ny ekipa Hilton dia miresaka momba ny fomba fanao tsara indrindra noraisin'izy ireo nandritra ny taona lasa Famerenana amin'ny laoniny tanjona - Vahaolana azo tsapain-tanana amin'ny famoronana sy fampandehanana hetsika amin'ny tontolo aorian'ny aretina. Marin Bright avy amin'ny Smart Meetings dia mizara ny “boky fampianarana fahombiazan'ny COVID” momba ny famokarana haino aman-jery, ny ilaina amin'ny fifanarahana ary ny paikadin'ny fifandraisana ao Fitaovana volafotsy: fihaonana amin'ny lesona an'ny matihanina tamin'ny andron'ny COVID. Ny ekipa Maritz dia hijery ny fianarany avy amin'ny areti-mandringana ary amin'ny antsipiriany ny fomba hanohanan'ny fanomezana teknolojia vaovao ireo hetsika amin'ny ho avy Fanelingelenana amin'ny fotoanan'ny fanarenana: Maritz nanangana indray ny traikefa tamin'ny alàlan'ny teknolojia vaovao.
Ahoana no ahafahantsika mamorona sary an-tsaina ny fihaonana sy ny hetsika amin'ny alàlan'ny traikefa virtoaly? Izany no fanontaniana apetrak'i Derrick Johnson nandritra ny fotoam-pivorianyMisiona mitsikera: ny hoavin'ny zavatra niainana tamin'ny vanim-potoana niomerika miaraka amin'ny torohevitra momba ny fampandraisana anjara ny mpihaino "variana nomerika". Ny fampifangaroana ny dizitaly amin'ny ara-batana no ifantohan'ny Hybrid Events miampita ny fizarana ho an'ny traikefa ara-batana sy niomerika nizara. Amin'ity fivoriana ity, Dax Callner, talen'ny tetikady ao amin'ny Smyle, dia mizara hevitra azo ampiharina amin'ny famoronana traikefa iraisana sy tambajotram-pifandraisana ho an'ireo mpandray anjara izay miditra amin'ny Internet (URL) sy amin'ny sehatra ara-batana (IRL).
Tonga ny fotoana hamongorana ny fitongilanana sy handray ny fahasamihafana - ary ny indostrian'ny hetsika orinasa dia eo amin'ny toerana tsara hitarihana ohatra. Ny fahasamihafana, noho izany, dia mamorona kofehy fototra amin'ny fanabeazana, ny hetsika ary ny endrika vaovao an'ny IMEX America.
She Means Business, hetsika iraisan'ny IMEX sy magazine tw, tohanan'ny MPI, dia mizaha ny fahasamihafana, ny fitovian'ny miralenta ary ny fanamafisana ny vehivavy. Raha ireo olana ireo dia matetika mifampiresaka ny vehivavy sy ny lehilahy, fa tsy amin'ny samy izy. Natao hiova in ity Safidin'ny vehivavy: Resadresaka momba ny fahasamihafana sy ny fitovian'ny lahy sy ny vavy izay nanasan'i Michelle Mason an'i ASAE sy consultant, Courtney Stanley, roa lahy hifampiresaka. Misy ihany koa ny fotoana ahafahana manatevin-daharana vondrona fifanakalozan-kevitra madinidinika amin'ireo vehivavy mpandehandeha eny an-tsahan'izy ireo. Ashly Balding, Associated Luxury Hotels International; Meg Fasy, HetsikaGIG; Tracy Stuckrath, miroborobo! fivoriana & hetsika; Juliet Tripp, Fijerena simika; ary Nisha Kharé momba ny tantaram-piainan'ny olona dia kasaina hizara Fampianarana ho an'ny mpitarika vehivavy.
Ny fotoam-pianarana hijerena ireo singa hafa amin'ny fahasamihafana dia misy Fandraisana an-tanana ireo olona manana fahasembanana amin'ny fivoriana sy hetsika virtoaly ary Mametraka amin'ny asa: Ny fahasamihafana ara-pirazanana amin'ny indostrian'ny hetsika toerana misy an'i Cheerful Twentyfirst's Elena Clowes milaza ny tsipiriany momba ny fikarohana momba ny fahasamihafana ara-pirazanana.
ny vaovao IMEX | EIC People & Planet Village eo amin'ny seho fampisehoana dia handresy ny faharetana, ny fahasamihafana, ny fiatraikany ara-tsosialy ary ny famerenana. Ny mpiara-miombon'antoka dia misy ny LGBTMPA, ECPAT USA, raharaha Diversity momba ny fizahan-tany, Fonds indostrialy fihaonambe, Fivarotana midika ho fivoriana, SEARCH Foundation, Above & Beyond Foundation, ary Diovy izao tontolo izao. Ny KHL Group dia hanasa ireo mpanatrika ihany koa hanangana Clubhouse - toerana filalaovana manokana ho an'ny zaza marary sy ny mpiara-mianatra aminy.
Mampientanentana sy tsy ampoizina ny hetsika sosialy
Na dia mijanona ho foiben'ny orinasa sy fianarana aza ny seho, dia misy ihany koa ny fotoana maro ahafahana mifandray ivelan'ny seho fampisehoana. Ny fitsangatsanganana bespoke dia manome ny fihenan'ny Las Vegas na ny sakafo tsara indrindra, ny zava-niainana miafina na ny lalana anatiny amin'ny toerana malaza roa: ny lapan'i Kaisara sy ny Helodrano Mandalay. Misy ihany koa ny antony fankalazana amin'ny hetsika hariva Nite Site natao tao amin'ny Resorts World vaovao, ny sonia MPI Foundation nanao sonia hetsika tao Drais sy ny EIC Hall of Leaders ao amin'ny MGM Grand.
“Betsaka ny olona niantso an'i IMEX America ho 'fodiana ho an'ny indostria, 'ary tsy afaka miandry ny hiverenanay ny vondrom-piarahamonina misy anay izay hatao fihaonana manokana. Vao tafaverina avy nanao dia nankany Las Vegas aho, dia hitako ny fomba ifandraisanay akaiky amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay - anisan'izany ny tanàna mpampiantrano anay sy ny toerana vaovao - hanaterana seho azo antoka nefa tsy very maina velively. Azon'ny mpanatrika atao ny manantena fikitika IMEX mahazatra ho isan'ny traikefa amin'ny fampisehoana, ”hoy i Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX, namintina.
Ny IMEX America dia atao ny 9-11 Novambra ao Mandalay Bay any Las Vegas miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, amin'ny 8 Novambra. Hisoratra anarana - tsindrio maimaim-poana Eto. Raha mila tsipiriany misimisy momba ny safidin'ny trano hipetrahana sy ny famandrihana dia kitiho Eto.
Mirongatra ny fanafihana fampihorohoroana ao Ouganda